Kedu esi eweghachi mkpali gị mgbe oge siri ike?
Edere site Tranquillus | Sep 28, 2018 | Mmepe onwe onye
Nchụpụ, ọnwụ nke onye a hụrụ n'anya, ọdịda nke ule, mmebi mmekọrịta ịhụnanya… onye ọ bụla nwere ike ịnagide nsogbu ndị a n'oge ọ bụla. Ka ihe siriiri gị ike, iwe gị ewe iwe. Ma mgbe oké ifufe ahụ kwụsịrị, anyị ga-anwa ịga n'ihu. Olee otu iji nwetaghachi mkpali?
Ụkpụrụ ziri ezi inwe
Anyị nwere ike ịgwa onwe anyị na ọ dịghị onye nwere ike ịgbanahụ ajọ ifufe na na mgbe mmiri ozuzo, enwere ihu igwe dị mma. Mgbe nsogbu bilitere, ị ga-achọpụta otu o siri sie ike ịrị ugwu ahụ. O siri ike, mana ọ gaghị adị irè ma ọ bụrụ na ịmara etu esi eme ya!
Mgbe ihe isi ike gasịrị, anyị na-enwekarị mmetụta na-adịghị mma, karịchaa egwu. Nke a zuru oke. N'aka nke ọzọ, ọ dịghị mkpa mmadụ ikwe ka mmetụta ọjọọ chịkwaa ya. Anyị ga-akpọpụ ha, ọbụna ichu nta. Olee otú ime?
Nke mbụ, ị ga-ahapụrịrị gị ịkekọrịta ihe mgbu na mwute gị na ndị gbara gị gburugburu. Idebe onwe gị ihe mgbu agaghị enyere gị aka nke ukwuu. Ọzọkwa, mara na ikwupụta mmetụta gị abụghị ihe na-egosi adịghị ike. N’aka ozo, obu nnoo uzo di ire. Ọ na - enye gị ohere ịnabata ọnọdụ ahụ ma were nsogbu ahụ siri ike dịka o kwesiri. Ọ bụkwa ụzọ kachasị mma iji zere obi amamikpe nke nwere ike imebi mmụọ na ùgwù onwe onye.
A na-ada mbà n'obi. Anyị aghaghị ịnọgide na-ebi ndụ dị mma. Ọ bụ n'ihi nkwado nke ndị ọzọ na onye nwere ike ịchọta ike iji merie nsogbu ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ịdị n'otu nwere ike ime ka echiche ndị na-ezighị ezi bilie. Mgbe ha laghachiri na akaghị aka, ha na-emepụta nchekasị.
GỤỌ Nchegbu, weghachite ma kwupụta mmetụta gị n'ụzọ dị mma.
Nchegbu bụ onye iro iji lụọ ọgụ n'ihi na ọ ga-egbochi gị ịghaghachi mkpali gị. Anyị ga-achọta usoro ziri ezi iji jikwaa ya. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ike imeri nrụgide, ị nwere ike ịme ka mma ndụ gị n'ụzọ dị mma.
Zụlite echiche ziri ezi
Iji nwetaghachi mkpali na ọchịchọ ịga n'ihu, ọ dịkwa mkpa ịzụlite echiche ziri ezi. Iji mee nke a, mee obere nlọghachi n'oge gara aga iji cheta ihe ndị ọzọ siri ike na-etinye. Ọ nwere ike inye gị obi ike.
Gini bu ebum n’uche iji weghachi nsogbu nke gara aga? N'ezie, ọ bụ nzọụkwụ dị mkpa nke nwere ike inyere gị aka imeri ihe mgbochi ọhụrụ. Ihe mgbaru ọsọ bụ isi bụ icheta mmezu gị na ike gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị ga-eburu ihe ncheta dị mma n'isi, ya bụ, ịsị oge ị jisiri ike kwụsị nchegbu gị.
Mgbe ahụ, n'agbanyeghị nnukwu nsogbu anyị zutere, anyị aghaghị ikwu na nke a abụghị oge mbụ. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịbaghachi azụ n'oge gara aga, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji kwụsị oge a. Ọ na-adị mfe iji nweta mkpali.
Ch op uta ihe omumu ihe omumu
Ọ bụkwa ụzọ dị irè iji nwetaghachi mkpali gị mgbe a nwalere ule. Echiche bụ iji hụ ihe dị mma. N'ezie, oge siri ike bụ isi iyi nchegbu na nhụjuanya. Ma, ọ pụkwara iwetara gị ihe.
N’ezie, ọnwụnwa ga-eme ka i nwee ike iche nsogbu ihu. N'ihi gịnị? Naanị n'ihi na ha ga-achọ ka ị chịkọta ihe niile ị nwere. Ekwesịrị ikwu na anyị na-echekarị ichefu ịdị adị ha mgbe ihe mgbu na obi nkoropụ na-eme ka anyị kpuo ìsì.
GỤỌ Mara otú e si eme mkpebi ndị ziri ezi
Kwesiri iwepụta oge iji chọpụta ihe ndị ị na-emeta nke ọma ka ị nwee ike iji ọtụtụ mee ihe. Ọrụ mmepe onwe onye dị na mmemme ahụ. Naanị ịkwesịrị itinye usoro ziri ezi iji kwụsị akụ nke aka gị ma ghọta na ị nwere ihe niile ọ ga-ewe iji laghachi ndụ nkịtị.
Setịpụ ihe mgbaru ọsọ ezi uche
N’ọnọdụ niile, anyị echefughị ​​na ọ bụ naanị ihe isi ike ka anyị gabigara na mmerụ ahụ ka na-adịbeghị anya. Ọ pụtara na ị ka nwere nsogbu na ike adịghị gị. Ọnwụnwa ọzọ pụrụ igbu gị. Ya mere, anyi aghaghi iji nlezianya gaa.
Ihe mgbaru ọsọ bụ iji wughachi obere obere. Ọ dịghị mkpa ime nnukwu oso elu ma mesịa daa mbà mgbe ị na-enwe ihe mgbochi ọbụla. Mmadụ aghaghị izere nrụgide na nrụgide. Ị ghaghị inye oge ụfọdụ. Nzube kachasị amamihe bụ ịme ihe mgbaru ọsọ ziri ezi na nke ga-emezu.
Mara na site na ịkụ nzọ dị oke elu, ị ga-agba ọsọ ozugbo n'ụgbọ ahụ. N'ezie, ihe ọghọm nke iru ihe mgbaru ọsọ ahụ buru oke ibu. Agbanyeghị, ọ ga-ewe gị obere nkụda mmụọ ma ọ bụ ndakpọ olileanya ka ị daba daba na ndakpọ mmụọ. Yabụ ị ga-enye onwe gị oge wee kwuo ahịrịokwu na-akpali akpali dị ka "ị ga-aga nke ọma na oke gị".
Na-agbaso ụzọ dị iche iche
Iji mezuo ebumnuche ndị edobere, a ga-emepe ụzọ ndị ọzọ. Ikwesiri iche na ị ga-aga agha nakwa na iji nweta mmeri ị ga-enwe ngwa ọgụ kachasị mma enwere. N'ihi ya, anyị aghaghị ịmalite site n'ịhapụ omume ọjọọ. Na mgbakwunye, anyị ga-abawanye mbọ anyị.
GỤỌ Kedu ka ị ga-esi bụrụ ezigbo ihe n'ọnọdụ niile?
Marakwa na mkpali ahụ adịghị akwụ ụgwọ n'enweghị ezigbo ùgwù onwe onye. Anyị aghaghị ikwere na ihe ịga nke ọma. Tụkwasị na nke a, mụta ịmata ụkpụrụ gị. Atụla oge ịkele ọ bụla i weghaara. Ị ga-enwe mmeri mmeri ọ bụla, n'agbanyeghị obere. Mara na ọ rịọrọ gị ọtụtụ ọrụ na obi ike.
Anyị aghaghị ịkwụsị iche echiche nke ukwuu banyere ọdịnihu. Ọ bụ oge dị mkpa. N'ikpeazụ, na-eche banyere ịkọrọ ndị ị hụrụ n'anya mmetụta gị, nakwa na ha bụ ndị ọjọọ ma ọ bụ dị mma. Site na ime nke a, ị ga-eji nwayọọ nwayọọ chọpụta mkpali gị.
Na mmechi, ịmaliteghachi mkpali gị mgbe ịmịchara ike chọrọ nnukwu ọrụ. Ọ naghị eme n’otu ntabi anya. Havekwesịrị ịnye oge gị na karịa ihe niile, ị ga-aga n'ihu obere obere. Nke a bụ ihe kpatara na ọ dị mkpa ịghara isetịpụ nnukwu ebumnuche. Obere ihe mgbaru ọsọ iru kwa ubochi kariri. Learningmụta ịmata ụkpụrụ gị dịkwa mkpa. Na mgbakwunye, mmadụ agharịrị na ikike ya maka ihe ịga nke ọma ma mụta ijikwa ma chịkọta akụ nke aka ya.
Kedu esi eweghachi mkpali gị mgbe oge siri ike? September 21st, 2018Tranquillus
gara agaOtu esi eme ngwa nyochaa akwụkwọ gị, nchọpụta Antidote software.
-esonụOtu esi emepụta mbinye aka email gị ozugbo ma ọ bụ n'efu
Mee ka ogo gị dịkwuo mma iji mezuo ihe mgbaru ọsọ gị.
Ịtụnanya na-atụ egwu-Egwu dị ka ihe mgbaàmà
Igodo 5 nke nwere ike inyere gị aka ịchịkwa nchegbu ma zere nsogbu